खेलकुद – Page 84 – BIG FM 101.2 MHz
Home » खेलकुद (page 84)
चौथो संगम सेभेन ए साईड फुटबल जारी
पोखरा १३, वैशाख/चौथो संगम सेभेन ए साईड फुटबल प्रतियोगिता अन्र्तगत शनिबार पहिला चरणका ७ वटा खेलहरु सम्पन्न भएका छन । माछापोखरीको खेल मैदानमा शनिबार भएको पहिलो खेलमा के.वाई.सी. सिङदी ले हेन्सम गाईजलाई २–० को गोल अन्तरले पाखा लगायो । सिङदीको जितमा बुद्धिराज गुरुङ र मोहन गुरुङले एक एक गोल गरे ।योगेश दुराको निर्णायक एक गोलको मद्धतले दोश्रो खेलमा डी.वाई.सी. मिलनटोलले …
धरमलाई गुडविल कप टेनिस उपाधि
Ranjan Adhikari Chhetri खेलकुद
पोखरा, १२ बैशाख / धरमबहादुर लामिछानेले गुडविलकप पोखरा ओपन टेनिस प्रतियोगिताको उपाधी जितेकाछन् । शुक्रबार सम्पन्न फाइनल खेलमा उनले राजु गुरुङ्गलाई ७–५ र ५–२ ले पराजित गरे । पहिलो सेट ५–२ को अवस्थामा दुईपटक सम्म म्याच प्वाइन्ट आफ्नों पक्षमा पार्न नसक्नु राजुका लागि दुर्भाग्य भयो । उनले ४–१ को सेटमा फर्किदै खेलमा ५–४ ले अग्रता लिएका थिए । पहिलो सेट सुपरटाईमा लिएका लामिछानेले …
ब्रिगेड ब्वाइज ए डिभिजन लिगमा बढुवा
काठमाडौं, १२ बैशाख। ब्रिगेड ब्वाइज क्लब ए डिभिजन लिगमा बढुवा भएको छ । शुक्रबार भएको खेलमा नयाँबस्ती युवा क्लबलाई १-० गोल अन्तरले पराजित गर्दै ललितपुरे क्लब ब्रिगेड ब्वाइज बी डिभिजन लिग च्याम्पियन बनेको हो । दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा ब्रिगेड ब्वाइजका लागि २५ औं मिनेटमा दिनेश सिंह खड्काले निर्णायक गोल गरेका थिए । ब्रिगेड व्बाइज पराजित भएको भए मध्यपुर युथ …
स्ट्राइकर अनिल भए वर्ष खेलाडी, कार पुरस्कार
काठमाडौं, ८ वैशाख/ राष्ट्रिय फुटबल टिमका स्ट्राइकर अनिल गुरुङ एनसेल प्लेयर अफ दी इयर भएका छन् । अनिलले फाइनल राउण्डमा भरत खवास र भोलानाथ सिलवाललाई पछि पारेका हुन् । अनिलले उपाधि साथ कार पुरस्कार पाए । एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा आयोजित एक समारोहका बिच खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले अनिललाई कारको साँचो हस्तान्तरण गरे । ए डिभिजन लिग क्लवका प्रशिक्षक र खेल पत्रकारको …
मुखिया प्रिमियर लिग खेल्ने टोलीमा परेनन्
काठमाडौं, ८ वैशाख/विश्वकप २०–२० क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका बलर जितेन्द्र मुखिया आगामी मे १ बाट मलेसियामा हुने एसीएसी प्रिमियर लिग खेल्न नपाउने भएका छन् । पहिलो चरणमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले सार्वजनिक गरेको १८ जना खेलाडीको सूचीमा जितेन्द्र अटाएका छैनन् । विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका उनी चिर प्रतिद्वन्द्वी अफगानिस्तान विरुद्धको खेलमा म्यान अफ दी म्याच भएका थिए । क्यानको …
नेदरल्याण्डमा विमल गोल गर्न सफल
पोखरा, ८ बैशाख/नेदरल्याण्डमा जारी एगन फ्युचर कप फुटबलमा बेल्जियमको एन्डरलेज क्लवबाट खेलिरहेका विमल घर्ती मगरले पहिलो गोल गरेका छन् । टर्कीको फेनरबसविरुद्धको खेलमा विमलले गोल गरेका हुन् । उनले खेलको ८ औँ मिनेटमा आकर्षक गोल गरि खाता खोलेका थिए । खेलमा एन्डरलेज २–० गोलले विजयी भयो ।अन्डर १७ टिमहरु सहभागी प्रतियोगितामा विमलको एन्डरलेज सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । हिजो भएका खेलमा …
विमलको गोलले एन्डरलेच्टको जित
७ बैशाख, काठमाडौं । नेपाली युवा स्ट्राइकर बिमल घर्तिमगरले गोल गर्दै बेल्जियमको एन्डरलेच्ट क्लबलार्इ यू-१७ फ्यूचर कपको सेमिफाइनल पुर्याउन सफल भएका छन् ।ट्रायलका लागि युरोप पुगेका उनले आइतबार भएको फ्यूचर कपको क्वाटर फाइनल खेलमा फिनरबाचेविरुद्ध गोल गरेका हुन् । एन्डरलेच्टले फिनरबाचेलार्इ २-० ले पराजित गरेको हो खेलको पहिलो हाफको ९ मिनेटमा विमलले एन्डरलेच्टका लागि गोलको खाता खोले । एन्डरलेच्टलार्इ जिताउने क्रममा उनले प्रहार गरेको …
शुभकामना कपको उपाधि हेमजाको बिष्णुपादुका क्लवलाई
पोखरा,७ बैशाख। हेमजा युनाईटेड हेमजा कास्कीले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा आयोजना गरेको शुभकामना कप–२०७१ नकआउट फुटवल प्रतियोगिताको उपाधी विष्णुपादुका क्लव निलोले चुमेको छ । शनिबार भएको फाईनल खेलमा लेकसाईड युथ क्लवलाई १–० को गलअन्तरले पछि पार्दै विष्णुपादुका क्लवले उपाधी हात पारेको हो । निर्धारित समयमा दुवै टिमबाट गोल हुन नसकेपछि अतिरिक्त समयमा विष्णु पादुका क्लवका जर्सी नं.२ का खेलाडी नाङसेलले गरेको …
विमलको टिमद्वारा एसी मिलान पराजित
काठमाडौं, ६ वैशाख/आजबाट सुरु भएको एगन फ्युचर कप फुटबलमा नेपालका किशोर स्ट्राइकर विमल घर्तीमगर सहभागी बेल्जियमको एन्डरलेजले इटलीको एसी मिलानलाई पराजित गरेको छ । नेपाली समय अनुसार शनिबार दिउँसो नेदरल्याण्डमा भएको खेलमा एन्डरलेजले एसी मिलानलाई २–१ गोलले पराजित गर्यो । युरोपियन क्लवका अन्डर–१७ टोलीहरु प्रतियोगितामा सहभागी छन् । एसी मिलानविरुद्ध विमल खेलको अन्तिम १० मिनेट मात्रै खेले । ६० मिनेट …
क्रिकेट खेलाडी र क्यानबीच तीनबुँदे सहमति
४ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय क्रिकेटर र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को बीचको बिबाद अन्त्य भएको छ । योजना निर्माण र अनुगमन समिति बनाउनेसहित तीनबुँदे सहमति भएपछि बिबाद अन्त्य भएको हो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सदस्य सचिव युवराज लामाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा प्रशिक्षक पुवुद्धु दशानायके, राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्का, मन्त्रालय र क्यानका एक …